I-Tilt Brush sisicelo seGoogle sokuzoba ngokwenyani | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inyaniso yokwenyani iyadibana ngoku kumzuzu okhethekileyo, ngakumbi emva kokuvela kweemveliso ezithile kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni ebanjelwe kwiveki ephelileyo e-Barcelona. Ithuba apho ukubheja okungafaniyo okuveliswe ngabavelisi abohlukeneyo kusisa kwezinye iihlabathi kunye nakwihorizons.
I-Tilt Brush sisicelo se zoba ngokwenyani eyayithengwe nguGoogle ngo-Epreli wonyaka ophelileyo. Isicelo esikwazileyo ukwazi ukuba uGoogle ubephethe ukuyiphucula kwezi nyanga ukusizisa kumava obugcisa kwabo banokuwasebenzisa kwizixhobo eziyinyani.
Esinye sezixhobo esinokusetyenziswa yiHTC Vive, ngokuchanekileyo eyona inikezela ngamava okwenyani kule mizuzu. Ngale sicelo siza kuba nayo phambi kwamehlo ethu kwiidigri ezingama-360 kunye nokujikeleza ngokupheleleyo, oku kuthetha ukuba siza kujongana nokuphindaphinda kwezobugcisa okuya kuba nomthamo.
Sele siyibonile opopayi opholileyo ovela kwiDisney Glen Keane ukuzoba ngesi sixhobo se-HTC senziwe ngokudibeneyo neValve. UKeane usibonisile izakhono zakhe kuyamangalisa ukuzoba xa kubuyiswa kwakhona abalinganiswa beDisney abanemilo endithe ndenza amagqabantshintshi ngayo kwaye ibonelela ngamava eTrus Brush
Esi sicelo siphantsi kwebhanti yaso Iphalethi entle yeziphumo kunye neebrashi ukwenzela ukuba umculi afumane okuninzi kuyo. Imigca emincinci kunye nengqindilili kunye nazo zonke iintlobo zokugqitywa ezilinganisa iindlela ezahlukeneyo kunye nezixhobo zokukhupha umthambo wobugcisa ngokuzonwabisa kwe-3D okuphawula umendo omtsha oza kwenziwa ngabazobi abaninzi. Siqinisekile ngale nto.
Un indlela entsha evula kubugcisa ngobunyani bokwenyani kwaye kungekudala sizakuyiveza apha kunye nezindululo ezahlukeneyo zabazobi kunye nabapeyinti abagqitha kwesinye sezixhobo eziza kuqala ukufikelela kumakhaya abantu abaninzi kwihlabathi liphela.
Unayo olunye ulwazi yiTilt Brush ukusuka apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Tilt Brush yinkqubo yokuzoba emangalisayo kaGoogle yenyani yokwenyani
Iipotifoliyo zasimahla ezingama-50 kunye nemixholo yeshishini yowama-2016